एनआईसी एशियाको छलाङः ६ महिनामै कमायो एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, वेसरेट सिंगल डिजिटमा :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Jan 16, 2019 12:06 PM
काठमाडौं। एनआईसी एशिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १६४ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ। बैंकले ६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा ५७ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा थियो। नियामकीय प्रणाली अनुसार समायोजन गर्दा लाभांश बाँड्न योग्य नाफा भने एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।बैंकले ६ महिनाको अवधिमा निक्षेप संकलन ४६ प्रतिशतले बढाएको छ भने कर्जा लगानी ४८ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकले पुस सम्ममा एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको हो।
बैंकको खुद व्याज आम्दानी १३३ प्रतिशतले बढेको छ। जसमा ब्याज आम्दानी ७४ प्रतिशतले बढेको छ भने ब्याज खर्च ५१ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकले खुद व्याज आम्दानी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। प्रतिशेयर आम्दानी एक वर्षको अवधिमा १४ रुपैयाँबाट ३४ रुपैयाँ पुगेको छ।
बैंकको कष्ट अफ फण्ड, पूँजी कोष अनुपात र आधार व्याज दर घटेको छ। बैंकको स्प्रेडदर भने गत वर्ष भन्दा केही बढेर ४.९८ प्रतिशत पुगेको छ। आधार व्याजदर भने १०.७४ प्रतिशतबाट ९.३३ प्रतिशतमा झरेको छ। पूँजी वृद्धि योजनापछि शाखा विस्तारसँगै सेवा पनि एग्रेसिभ रुपमा अघि बढाएको छ।
वित्तीय विवरण (रु. हजारमा)
कुल संचालन मुनाफा
नियामकीय समायोजन पछिको नाफा
कस्ट अफ फण्ड
एनआईसी एशियाको छलाङः ६ महिनामै कमायो एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, वेसरेट सिंगल डिजिटमा को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)
Anurag banjara[ 2019-01-19 08:48:30 ]
बैकले यति धेरै नाफा जनताको ढाड सेकेर कमाएको हो । जनताले कम ब्याजमा लोन पाए भन्ने कुरा पो खुसिको कुरा हो । लगानी कर्ता र एस्का ब्यबस्थापन पक्षहरूले जन उत्तरदायी भएर सोच्नु जरुरी छ ।पत्रकारले जनताको खबर किन नलेख्ने ? बैंकले अरब कमाउदा किन खुसी हुने ? नियामक निकायले नाफाको सिमा तोक्न पर्छ किनकी नाफा जनताको रगत पसिना र आशुबाट सिन्चित हुन्छ ।
Anurag banjara[ 2019-01-19 08:42:16 ]